HRW oo cadaysay in isbahaysiga Sacuudiga ay duqaymo ku dileen Qaxooti Soomaali ah oo saarnaa Dooni – Balcad.com Teyteyleey
Hay’ada xaquuqda aadanaha u dooda ayaa si buuxda u sheegtay inay muuqato weerarkii isbahaysiga Sacuudiga uu ku qaaday doon ay la socdeen qaxooti Soomaali ah ay bixin doonto sida lagama maarmaan ay u tahay la xisaabtanka kooxaha ku hardamaya dalkaasi Yemen.
Bishaan 16-keeda ayay ahayd markii diyaarad nooca qumaatiga u kacda ay weerartay doontaasi waxaana ku dhintay ugu yaraan dad lagu qiyaasay 32-qof.
Agaasimaha qeybta bariga dhexe ee HRW Sara Liya Waytsin ayaa sheegtay inay u qaadan doonan wixii ay sameyen isbahaysiga sacuudiga dhacdooyinkii is xig xigay ee ka dhacayay Yemen ee ay dadka rayidka ku dilayeen labadii sano ee la soo dhaafay waana mid xadigeedu gaarsiisan yahay danbi dagaal.
Dhanka kale mid kamid ah dadkii doonida We can fulfill your diovan needs in the best and most cost effective way. Buy your diovan now for only 1.25 USD! saarna ayaa u sheegay HRW in doonida ay ku socotay 50-km xeebaha u dhow magalada Xudeydiya kadibna ay la kulmeen duqeyn, waxayna HRW ugu baaqday dowladaha Mareykanka Fransiiska iyo Britten oo hub siiya isbahaysiga Sacuudiga in la baaro dhacdadaasi.